A10 ANC Headphone | OneOdio
Home / A10 ANC Headphone
A10 ANC Headphone
【Headphone On, World Off】 - Ny teknolojia fanafoanana ny tabataba dia afaka manala ny feon'ny fiaramanidina fiaramanidina, ny fifamoivoizana an-tanàna na birao sahirana. Ny fihenan'ny tabataba dia -23 hatramin'ny -25 dB, ary ny fihainoana fihainoana amin'ny seho isan-karazany dia mihatsara amin'ny alàlan'ny fihenam-bidy hatramin'ny 90% amin'ireo fihenam-peo henjana sy ny feo miketriketrika, manempotra ny tabataba any ivelany. Afaka mifantoka amin'ny zava-dehibe ianao.
【Ultra-Fast Charge & 40H Playtime & Wired mode】 - Rehefa mikoropaka ianao, dia mitaky famerenany mihoatra ny 10 ora ny fanamafisana 2 minitra. Fameren-dresaka 40 ora amin'ny famerenany feno noho ny habetsaky ny bateria ambony amin'ny 750 mAh, aza mila manahy momba ny tsy fahampian'ny herinaratra amin'ny dia lavitra. Afaka mankafy maody maimaim-poana na tariby (tadim-peo Type-C) arakaraka ny tianao ianao. Fanamarihana: ny maody Wired dia tsy mandeha rehefa tsy misy ny bateria.
【Bluetooth V5.0 sy CVC 6.0 Mikrofonofy sy antso an-tanana tsy ara-tanana Enjoy - Ankafizo ny fifandraisana haingana sy maharitra miaraka amin'ny Bluetooth 5.0 ary ny fampitana feo very. Ny mikrofona amin'ny CVC 6.0 naorin'ny fanamafisam-peo dia manome antoka ny antso an-tanana amin'ny fiteny mazava, afaka mandray / manao antso maimaimpoana ianao ary miditra amin'ny mpanampy anao. Mifanaraka amin'ny finday Android sy iOS sy takelaka, MP3, MP4, iPod, PC, TV, ary fitaovana hafa an'ny Bluetooth.
Quality Kalitao Hi-Fi Feon-kira tsy mampino】 - miaraka amin'ny diaphragm 40 mm, dia manome bass lalina, feo mazava ary feo stereo avo lenta, feo mahery izay mandanja mazava tsara amin'ny alalàn'ny bass marina. Ary ny OneOdio Active Noise Hanafoana ny Fonon-tanana Bluetooth dia afaka manankarena, audio amam-pahavitrihana hatramin'ny 10 metatra / 33 tongotra.
【Mahazo aina sy famolavolana matevina】 - Padon-tsofina malefaka fonon-tsofina Fampandrenesana ny proteinina foam dia manodinkodina ny sofinao hampisy traikefa mahafinaritra. Ny volon-doha fanitsiana azo atao dia manome anao mora ny mametraka ny headset Bluetooth amin'ny sofina tsara amin'ny habeny mety. Ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina fiaramanidina dia ahafahanao mijery horonan-tsary amin'ny fiaramanidina. Rehefa vonona ny hanome azy ireo fitsaharana fotsiny ianao dia aforeto fotsiny izy ireo amin'ny raharaha fitsangatsanganana, izay noho ny famoronana portable.
Aoka ianao no ho voalohany hametraka fanontaniana momba izany.